Waddan Islaam ah oo Haweenka u oggolaaday Inay Guursadaan Ragga aan Muslimiinta ahayn | Somaliland Post
Home News Waddan Islaam ah oo Haweenka u oggolaaday Inay Guursadaan Ragga aan Muslimiinta...
Tunis (SLpost)- Dowladda Tunisia, ayaa Wax-ka-beddel ku samaysay Xeerka Islaamiga ah ee haweenka muslimiinta ah ka mamnuucaya inay guursadaan ragga aan haysan Diinta Islaamka.
Tallaabadan ayaa noqonaysa mid ka hor imanaysa Shuruucda Diinta Islaamka oo dhigaysa Inaanay haweenka Muslimiinta ahi guursan karin ragga aan Muslimiinta ahayn.
Haweeney afhayeen ah oo u hadashay madaxweynaha dalkaas, Beji Caid Essebsi, ayaa ku dhawaaqday arrintan waxayna dumarka ugu hambalyeysay helitaanka waxa ay ugu yeedhay “Xorriyadda ku saabsan in qof walba uu guursado qofkii dookhiisa ah”.
Sharciga u yaalla Dalalka Muslimka ah oo Tunisia ka mid tahay, Nin kasta oo aan muslim ahayn haddii uu damco inuu guursado haweeney reer Tunisia ah oo muslimad ah, wuxuu ku khasban yahay inuu soo islaamo, islamarkaana uu soo bandhigo shahaado caddeyn u ah inuu diinta islaamka qaatay. Balse tallaabadan ayaa wax ka beddelaysa arrintaas gudaha dalka Tunisia.
Xuquuqda Dumarka Tunisia
Xaddidaaddaas ayaa sidoo kale loo arkayay mid aan waafqsaneyn dastuurka Tunisiya ee la dhaqan galiyay sanadkii 2014-kii, kaasoo uu sabab u ahaa kacdoonkii loo yaqaannay Gugii Carabta (Arab Spring).
Maxay ka dhigan tahay tallaabadani?
Sida ay sheegtay Rana Jawad, oo BBC News uga soo warranta magaalada Tunis, dad badan oo reer Tunisiya ah ayaa tallaabadan u arka guul kale oo laga gaadhay hirgalinta xuquuqda haweenka ee waddankaas.
Waxay arrintan Tunisia ka dhigeysaa waddankii ugu horreeyay ee ka tirsan gobolka dalalka Carabta ee Bariga dhexe iyo Woqooyiga Afrika ee laala sharciga guurka ee waafaqsan diinta ugu weyn ee waddanka laga heysto.
Bishan July gudaheeda, baarlamaanka Tunisia ayaa meel mariyay sharci cusub oo soo afjaraya xeer horay u dhigayay in ragga kufsiga geysta ay ciqaab walba ka badbaadaan haddii ay guursadaan gabdhaha ay kufsadeen.